Fitaovana Nomerika Iray Vaovao Manampy Ireo Mpikatroka Ao Rio de Janeiro Manangom-Baovao Amin’ny Fihoaram-Pefy Nandritra Ny Lalao Olaimpika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Aogositra 2016 9:15 GMT
Vakio amin'ny teny русский, नेपाली, Español, English
Pikantsary avy amin'ny tranonkala WITNESS .
Vao tsy ela akory izay ny Lalao Olaimpika ao Rio no nandray ireo atleta tsara indrindra avy amin'izao tontolo izao ary nanome sehatra ho amin'ny fahombiazan'ireo matanjaka indrindra tamin'ny zava-bita ara-batana, saingy hita taratra miharihary ny tsi-fitoviana tao amin'ny tanàna izay nampiantrano ny hetsika. Niainga tamin'ny fandroahana ankeriny ny vondrom-piarahamonin'ny Vila Autódromo mba hanome làlana ho an'ny Vohitra Olaimpika ka hatrany amin'ny fepetran'asa ratsy dia ratsy indrindra, miorina eo ambonin'ny fanitsakitsahana ny zo marobe ny fanatontosana ny fampisehoana.
Angamba misy amin'ireo fanararaotana ireo ny mora nafenina ambany tsihy rehefa mitodika any amin'ireo medaily sy lanonana namirapiratra ny fampitam-baovao, kanefa nitrandraka ny herin'ny teknolojia vaovao ireo mpikatroka mba hanangonana sy izarana ireo porofom-bidin'ny Rio 2016.
Fitaovana iray vaovao manome fahafahana ireo mpikatroka sy fikambanana ifotony hiara-miasa hanangonana [votoatim-baovao] manana fifandraisana amin'ny tanjon'izy ireo ny CrowdVoice.by. Manatsara ny asa amin'ny alàlan'ny fanangonana sy fampielezana ny porofo ilay fitaovana fisintonana votoaty avy amin'ny loharanom-baovao maro any amin'ny sehatra maro samihafa. Mandrisika ireo mpisera izany hitrandrahana ny herin'ireo tambajotrany mba hiasa haingana kokoa sy manara-penitra kokoa.
Mampiasa ny CrowdVoice.by ny WITNESS, ilay fikambanana iraisam-pirenena manofana ny olom-pirenena amin'ny fandraketana fanitsakitsahana zon'olombelona, mba hanangona lahatsary mivantana sy ny vaovao nozaraina tao amin'ny media sosialy mikasika ny toe-javatra iainan'ireo mponina ao Rio de Janeiro hanaovana ny songadina ” Rio 2016 Human Rights Live” [Mivantana zon'olombelona Rio 2016]. Satria mampiasa embeds [kaody tsofoka] ny CrowdVoice.by dia mora ny mampiditra azy miaraka amin'ireo fitaovana hafa ao anatin'ny sehatry ny pejy tranonkalan'ny fikambanana iray. Ao amin'ny songadin'ny Witness dia nampiasaina miaraka amin'ny Timeline izay fitaovana fanavaozana faham-baovao avy amin'ny Knight Lab ny CrowdVoice.by.
Nampiasa CrowdVoice.by ny hetsika iray hafa, Rio2036, mba hanolorana ny vaovao fototra mifanaraka amin'ny foto-keviny. Ny fanentanana dia natsangana hanoherana ny volavolan-dalàna mety ho nampiato ny fandanian'ny governemanta amin'ny servisy sosialy ao an-tanàna. Nisy tsofoka media iray mivoaka miaraka amin'ireo afisy kely azo atonta pirinty hampiroboroboana ny fanentanana eny an-dalambe momba ny raharaha mandritra ny fotoana mampafana indrindra ny Lalao Olaimpika, manome ohatra amin'ny fihaonan-dalana eo amin'ny fikatrohana nomerika sy eny an-kianja izany. Mamela ny mpitsidika ny CrowdVoice.by hijery ao amin'ny toerana iray ao anatin'ny fotoana haingana dia haingana ny fampahafantarana avy amin'ny loharanom-baovao maro, ary ahafahana mandray anjara mivantana ihany koa ao amin'ny firohotana.
Pikantsary avy amin'ny tranonkala Rio2036 .
Raha mbola ao anatin'ny fanandramana dingana faharoa ny CrowdVoice.by , dia efa nisafidy izany sahady ny mpikatroka liana teknolojia ao Rio de Janeiro hahazoany antoka fa tsy odian-tsy hita na adinoina ny olana resahany. Manana fampiasa tsy hita isa any amin'ny fikambanana tsy hita isa any ankoatran'i Brezila sy any ankoatran'ny Lalao Olaimpika ny CrowdVoice.by sy ny fitaovana tahaka azy. Manana fahafaha-manao hanome vahana ny olom-pirenena na aiza na aiza ilazana ny tantarany ny teknolojia namboarina manokana hifanaraka amin'ny filàn'ny mpandala ny zon'olombelona, ary hampiasa ny porofo nangonin'izy ireo hitakiany fanamelohana sy fiovana.
6 andro izayEl Salvador